Họtelu ndi di na Ilorin, Kwara - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Ihe Banyere Ilorin
Obodo nke ndi oka ikpe bu nke ndị Yoruba tọrọ ntọala ya na afo 1450 ndi gara-aga. Bu isi obodo nke Kwara Steeti ugbu a na Nigeria, Ilorin bụ obodo nke otutu agbụrụ dị iche iche dị ka Yoruba, Hausa, Fulani, Nupe, Baruba na ndi mba ọzọ.
N'oge gara aga, Ilorin bụrụ ebe isi nke itu mgbere ahịa ohu , ebe a nara esi ezipu ndị ohu gafee Sahara ga na mba ugwu tupu eziga ha
Brazil, USA na West Indies gbanwere atụmatụ. Ilorin na otu oge bụrụ ebe isi ụlọ ọrụ nke ndị agha nke oge ochie nke obodo Oyo di ukwu.
Obodo ndi Agbata obi Nke Oyo
Ilorin bu nke di na ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Offa, ugwu ọwụwa anyanwụ nke Ogbomosho. Ilorin bụ nke di na ebe agalaba atọ nke okporo ụzọ; okporo ụzọ Alimi nke si n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ , okporo ụzọ nke Surulere bu nke di n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ na okporo ụzọ Emirs nke si n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ
Ogige Ebe Njem Nleta
Hụta Owu Fall, ebe mmiri na asụda site na elu nke na akpukota buru mmiri-oyi na ọdọ mmiri ya. Owu Fall bụ otu n'ime ndị kasị elu (di ogbu/omimi rue 120 mita) buru kwa na ọdọ mmiri nke di itu na anya na akpali nmasi n'ebe ọdịda anyanwụ nke mba afrika. Ga njem nleregharị anya na obodo nta Odo - Owa mara nma nke di na okpuru isi ochichi ime obodo Oke – Ero maka ihuta Imoleboja Rock Shelter, nọọkọta nke nkume bu nke madu kariri ọtụ nari pụrụ inọọ ọnọdụ na okpuru ya. Aha bu 'Imoleboja' na olumba/okwu obodo bu nke pụtara 'Chineke wuru ụlọ'.
Ogige ebe nleta ndị ọzọ na-adọrọ mmasị bu ndi a; Alfa Alimi‘s Mosque bu ulo ogbako okpukperechi nke ndi alakụba na ebe obibi ha, Ihe Ememme nke Agan, Dada pottery nke bu ulo ebe a na akpa okụkọ, ụlọ ọrụ (ofisi) nke Lord Lugard na ikpotu ole na ole n’ime ha aha.
Ulo onuno na họtelu ọ bụla na Ilorin bu nke enwere ike itinye akwụkwọ maka ya ngwa ngwa na Jumia Travel. Tinye akwụkwọ ma kwuọ ugwọ site na igwe kọmpụta ma ọ bụ kpọ okwu nke ekwe-nti ma mee nkwenye maka akwụkwọ itinyere maka họtelu kariri iri asaa na itoolu ndi di na Ilorin.
Họtelu Tanke Họtelu GRA Họtelu Adewole Estate Họtelu Ganmo Họtelu Irepodun Họtelu Offa
Họtelu Ilota Họtelu Oke Ero